နည်းပညာ: silica gel, ရေဖန်ခွက်, ဗဓေလသစ်သဲ, အတုလုပ်တဲ့
လျှောက်လွှာ: စုပ်စက်အဆို့ရှင်, မော်တော်ကား, စိုက်ပျိုးရေး, အခြားစက်မှုလယ်ပြင်။
မီးခိုးရောင်သံအားလုံး foundry သတ္တုအများဆုံးစွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးသောကာဗွန်အကြောင်းအရာ foundry အတွက်အရည်ပျော်နှင့်သတ္တုများပုံသွန်း၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အတာဝန်ရှိသည်။ ကျုံ့နှင့်မြင့်မားလျော့ပြေ၏အနိမ့်ဒီဂရီသို့မဟုတ်မရှိခြင်းအင်ဂျင်နီယာကများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအများဆုံးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသညျ။
မီးခိုးရောင်သွန်းသံ၏အထွေထွေဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုထပ်တိုး 2.1 မှ 4% ဖြစ်လျက်ရှိကာဗွန်နဲ့ 1 မှ 3% ဆီလီကွန်နှင့်အတူအလေးချိန်အားဖြင့် 95% သံဖြစ်ပါတယ်။ မန်းဂနိစ်နဲ့အခြားအညစ်အကြေးကိုလည်းလေ့တှငျတှေ့သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ကျဆင်းလာသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဘို့လိုအပ်အဖြစ်သွန်းသောသံမှဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ ဆာလဖာ, ဥပမာ, လေ့အရှိဆုံးချပစ်သံအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မဟုတ်ရင်အနိမ့်သောအရာခိုငျမာတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သွန်းသောသတ္တုမိတ်ဆက်သည်။
အစိမ်းရောင်သဲတန်ဆာ is frequently the most economical method of producing castings. Although castings up to 500kgs pounds or more can be made in green sand, it generally is used for medium to small size castings. If green sand molds are not sufficiently hard or strong, some mold wall movement may take place during solidification, and shrinkage defects develop.
အဆိုပါ shell ကိုတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားလည်း shell ကိုမှိုမှတပါးမှို၏အခြားအမျိုးအစားများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသော cores, အောင်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါမူလတန်းအားသာချက်ကတော့သတ္တုများပုံသွန်း၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် finish ကိုတိုးတက်အောင်တစ်အပူသတ္တုပုံစံနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိအမှိုသို့မဟုတ် core ကိုခိုင်မာစေနိုင်စွမ်းသည်။
မီးခိုးရောင်သံသတ္တုများပုံသွန်း မော်တော်ကား, စိုက်ပျိုးရေး, စက်ပစ္စည်းအဆောက်အဦ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ဆည်မြောင်း, လေဝင်လေထွက်, ဗိသုကာ, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင်အများအပြားစျေးကွက် segments များအတွက်အသုံးပြုသည်
နောက်တစ်ခု: ပဲ့ကိုင် stents